September 2019 - Page2of4- D Khit Media
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ Lucknow မြို့မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ဆေးရုံတက်ရောက်နေရတဲ့ အမျိုးသားတစ်ယောက်ကို ဆေးရုံဆရာဝန်က သေပြီဆိုပြီး နေအိမ်ကို ပြန်သယ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသားအမည်မှာ Mohammad Furqan ဖြစ်ပြီး၊ အသက်(၂၀) ဖြစ်ပါတယ်။ Furqan ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေဟာ သူ့ကို ကယ်ဆယ်နိုင်ဖို့ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အဆိုပါ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံထံကို ရူပီး(၇)သိန်း ပေးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာငွေကျပ်အားဖြင့် (၁၅၃)သုံး တန်ဖိုရှိပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပိုက်ဆံထပ်တောင်းရာ Furqan ရဲ့ မိသားစုတွေက သူတို့မှာ […]
ရန်ကုန်က BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှူး ဒေါက်တာ အောင်ဇော်ကို ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ အဂတိလိုက် စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၆ နဲ့ အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့် တိုင်ကြားထားတယ်လို့ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က ဒီကနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ရဲစခန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ ဒေါက်တာ အောင်ဇော်ကို မြို့မရဲစခန်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားတယ်၊ ကော်မရှင်က စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ စခန်းတာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီစက်ရုံမှူးဟာ အင်းစိန်စက်ရုံနဲ့ […]
စာမခိုးချရန် ကတ်ထူစက္ကူပုံး စွပ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေခိုင်းသည့် မက္ကဆီကိုကျောင်းဆရာ ဝေဖန်ခံရ
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ကတ်ထူပုံးတွေစွပ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေခိုင်းတဲ့ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံက ကျောင်းဆရာတဦးကို ကျောင်းသားမိဘတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်နေကြပါတယ်။ကျောင်းသားတွေ စာခိုးချတာကို တားဆီးဖို့အတွက် ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒါဟာ လူသားမဆန်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ဖြစ်တယ်လို့ ကျောင်းသားမိဘတွေက ယူဆနေပါတယ်။ မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ တလက်ကာတာ ပြည်နယ်က ကောလိပ်စားမေးပွဲတခုမှာ လူးဝစ္စဂျူ ရက် တက်ဇစ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကျောင်းဆရာက ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးပြုခဲ့တာပါ။ ကတ်ထူပုံးစွပ်ပြီး စာမေးပွဲဖြေနေတဲ့ စာမေးပွဲခန်းကို တက်ဇစ်က […]
“အတ္တကြီးတယ်ပြောပြော သားလေးခံရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး …. မိုးယုစံ “
” အမေကတော့ အနားမှာနေချင်စေတယ်။ အမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ အတ္တကြီးတယ်ပြောပြော သားလေးခံရတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူး …. မိုးယုစံ ” The_Radar [ ယခုသတင်းကို မိတ်ဖက်မီဒီယာ The Voice ၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]
ဒေသခံ ခုနစ်ဦး သေဆုံးမှုနဲ့ တပ်မတော်သား နှစ်ဦးကို အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ် ၂၀ ချမှတ်
ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မှာ ဧပြီလက ဒေသခံ ၇ ဦး သေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ တပ်မတော်သား နှစ်ဦးကို စစ်တရားရုံးက အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်ဒဏ် နှစ် ၂၀ စီချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့က ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ် အနန်းကွင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့ တပ်စခန်းမှာ ရိက္ခာလာထုတ်တဲ့ တပ်မတော်သား ၂ ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့တာကြောင့် အသက် ၈ နှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးအပါအဝင် အရပ်သား ၇ ဦးသေဆုံးပြီး ၁ ဦး […]
အင်းစိန် BPI ဆေးဝါးစက်ရုံမှူးဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေနဲ့ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်နေ့က အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းကနေ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းက ဒီဗွီဘီကို အတည်ပြုပြောပါတယ်။ စက်ရုံမှူးဖြစ်သူ ဒေါက်တာအောင်ဇော်ကို မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က တရားလို တိုင်ကြားအမှုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ အင်းစိန်မြို့မ ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ရဲစခန်းက တာဝန်ရှိရဲအရာရှိက ပြောပါတယ်။ “တရားလိုလုပ်ပြီး ကိုင်တွယ်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး […]
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မှာ အင်ဒိုနီးရှား သစ်တောမီး သွားရောက်ကူညီဖို့ နီပေါကနေ ပျံသန်းလာတဲ့ ရဟတ်ယာဉ်တစီး မနေ့က အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီရဟတ်ယာဉ်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သစ်တော မီးလောင်နေတာကို သွားရောက် ကူညီမယ့် နီပေါနိုင်ငံက Mi-8 -MTV-1 အမျိုးအစား ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်ပြီး ရာသီဥတု ဆိုးရွားတာကြောင့် စည်တောင်ရွာနဲ့ ရေခေါင်းချောင်းရွာကြား စားကျက်မြေပေါ်မှာ မနေ့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်က ဆင်းသက်ခဲ့တာလို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက ထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ ဒီရဟတ်ယာဉ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်-ရန်ကုန်-ထိုင်း […]
ကရင်ကျေးရွာလူထုခေါင်းဆောင် အသတ်ခံရမှု သစ်တောဝန်ထမ်း ၄ ဦးအား ရာထူးမှရွှေ့ပြောင်း
ထိုင်းနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်း ဖစ်ခ်ျပူရီခရိုင် ကဲင်ကကျန်မြို့နယ်ထဲမှာ ၅ နှစ်ကျော် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ကရင်ကျေးရွာလူထုခေါင်းဆောင် ၁ ဦးကို မီးရှို့ခံထားရတဲ့ အရိုးစုအဖြစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက် ကဲင်ကကျန် – သစ်တောကြိုးဝိုင်းက သစ်တောဦးစီးအရာရှိ ၁ ဦးနဲ့ ဝန်ထမ်း ၃ ဦးတို့ကို သက်ဆိုင်ရာက ရာထူးပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဝန်ထမ်း ၄ ဦးဟာ သေဆုံးသူ ပီလိ ခေါ် ဖော်လဂျီ ရတ်ကျုံးကျရွန်း မပျောက်ဆုံးခင် သူနဲ့အတူ […]
“ဖျော်ဖြေရေးနဲ့ ကြော်ငြာလေးနဲ့တင် ထိုင်စားနေရတယ်။ သူတို့က ကျွန်တော့်ကို လာငှားရင် ကုသိုလ်ရတယ်” သရုပ်ဆောင်ဖြူဖြူထွေးနဲ့ တွေ့ဆုံခိုက် လက်ရှိ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်း၊ အနုပညာကြေးဈေးကြီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ မင်းသမီးလုပ်တော့မလား စသည့် အကြောင်းအရာများကို မေးမြန်းထားပါတယ်။ Voice : ဖြူဖြူထွေးရဲ့ လက်ရှိအနုပညာလှုပ်ရှားမှုအကြောင်း ပြောပါဦး။ PPH : လက်ရှိကတော့ ကြော်ငြာတွေပဲ ရိုက်ဖြစ်နေတယ်။ နယ်ပွဲတွေ ဖျော်ဖြေဖို့ရယ်၊ ဇာတ်ကားတွေ ရိုက်ကူးဖို့ အများကြီးပဲရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာက ကြော်ငြာလာအပ်တာ များတယ်။ အရင်ကထက် […]